पछिल्लो ब्रेन ट्रेनिंग जानकारी अनलाइन - मन जीवित - मानसिक स्वास्थ्य र विश्राम
त्यहाँ संज्ञानात्मक रणनीतिहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो दिमागको सम्पूर्ण फिटनेस सुधार गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ खेलहरू छन् जुन तपाईं खेल्न सक्नुहुन्छ, र विभिन्न प्रकारका प्रशिक्षणहरू, जुन तपाईंको समग्र मानसिक क्षमता सुधार गर्न सक्दछ। यी यी खेलहरू हुन् जुन तपाईं शारीरिक, मानसिक, वा दुईको संयोजन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं आफ्नो मस्तिष्क एकदम विशेष तरिकामा प al्क्तिबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले के गर्नु पर्छ मस्तिष्क प्रशिक्षणको बारेमा नयाँ जानकारी फेला पार्नुहोस् जुन तपाईंलाई सोच्न र प्रसंस्करण जानकारीमा अझ प्रवीण हुन मद्दत गर्दछ।
मस्तिष्क प्रशिक्षण वास्तवमा के हो?
संज्ञानात्मक तालिम भनेको नियमित गतिविधिहरू गर्नु बाहेक केही होइन जुन संज्ञानात्मक क्षमताहरू सुधार गर्न डिजाइन गरिएको हो। यी दिमागका खेलहरू मानसिक कार्यहरूमा विशेष रूपमा प्रभाव पार्न डिजाइन गरिएको हो। तपाईको दिमागको प्रत्येक क्षेत्र तपाईले दिनहुँ गर्ने कार्यको विभिन्न पक्षका लागि जिम्मेवार हुन्छ। जब तपाईं एक पेशेवरसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ जसले यी कार्यक्रमहरू डिजाइन गर्न मद्दत गर्दछ, तपाईं विगतका डरहरू, अवरोधहरू, र सोच्ने तरिकाहरू हटाउन सक्नुहुन्छ जुन सामान्य मनोचिकित्सक वा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाहरू मार्फत सम्भव नहुन सक्छ। अनिवार्य रूपमा, तपाईंले व्यायाम गरे जस्तै, यस प्रकारको प्रशिक्षणले तपाईंको दिमागलाई झन् धेरै तरल पदार्थ र ग्रहणशील बनाउनेछ।
के अध्ययनहरू सकियो?
संज्ञानात्मक प्रशिक्षण गतिविधिहरूमा गरिएको अध्ययनले मानव मस्तिष्कको बारेमा धेरै कुरा देखाउँदछ। यो एक लचिलो पदार्थ जस्तै छ, एक बढ्न र समय बित्दै जाँदा परिवर्तन गर्न सक्दछ। तपाईको वरपरको वातावरणप्रति तपाईका प्रतिक्रियाहरू, साथै तपाईले दिनहुँ सोच्दै गरेका कुराहरु, तपाईको दिमागको गठनको शाब्दिक परिवर्तन गर्नुहोस्। यी परिवर्तनहरूले तपाईंको मस्तिष्कमा न्यूरो ट्रान्समिटरहरूलाई पनि असर गर्न सक्दछन् र उनीहरूले तपाईंलाई सोच्न, निर्णय लिन र नियमित आधारमा कार्यवाही गर्न अनुमति दिन्छ। अध्ययनहरू कार्यात्मक चुम्बकीय अनुनाद इमेजि। प्रयोग गरेर गरिएका छन्। अन्वेषकहरूले यी गतिविधिहरूको दौरान के भइरहेको छ भनेर हेर्न अनुमति दिन्छ। यसले परीक्षणका विभिन्न प्रकारका प्रभावकारिता निर्धारण गर्न सक्दछ जुन दोहोरिन सकिने परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ।
यस प्रकारको प्रशिक्षण कत्तिको प्रभावकारी छ?
हजारौं व्यक्तिले यस प्रकारको परीक्षण झण्डै एक दशकदेखि भोगेका छन्। लक्ष्य भनेको कसरी प्रशिक्षण रणनीतिहरूले व्यक्तिको मनोविज्ञानलाई असर गर्न सक्छ भन्ने निर्धारण गर्नु हो। त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जुन सिकाउँछन् कि शारीरिक आन्दोलनहरूले वास्तवमै तपाईले महसुस गर्ने तरिकालाई बढाउन सक्छ। त्यस्तै, तर केहि गतिविधिहरू कल्पना गर्दै, वा निश्चित तरिकामा सोच्दै, तपाईं शारीरिक संसारमा निर्णयहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया, यो प्रमाणित हुन सक्दैन कि संज्ञानात्मक कार्यहरू सँधै यस प्रकारको प्रशिक्षणबाट प्रभावित हुन्छन्। यद्यपि अल्जाइमर, डिमेन्शिया, र अन्य थुप्रै न्यूरोलजिकल समस्याहरूको अनुसन्धानले हामी मस्तिष्कलाई कसरी परिमार्जन गर्न सक्छौं भन्ने कुरा बुझ्नको लागि मार्ग प्रशस्त बनाएको छ।
मस्तिष्क प्रशिक्षण धेरै विभिन्न कम्पनीहरूबाट अनलाइन उपलब्ध छ। जहाँसम्म, यसले प्रायः साधारण चीजहरूको साथ काम गर्दछ जुन तपाईं आफैंमा गर्न सक्नुहुनेछ आधिकारिक कार्यक्रम बिना। केवल दिन भर मा तपाइँको दिनचर्याहरू परिवर्तन गरेर, वा तपाइँ अरू वा आफ्नै बारे सोच्दै हुनुहुन्छ भन्ने तरिका परिवर्तन गरेर, ठूलो परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि राम्रोसँग गरियो भने, यी परिवर्तनहरूले तपाईंको जीवनको मोड परिवर्तन गर्न सक्दछन् किनकि तपाईं पूर्ण भिन्न भिन्न परिसरमा आधारित निर्णयहरू लिनुहुनेछ। समय बित्दै जाँदा यस्तो सम्भावना हुन्छ कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षण उत्कृष्ट हुनेछ, मानिसहरूलाई मनोवैज्ञानिक समस्या र मुद्दाहरूको सामना गर्न सजिलो बनाउन।
के माइन्ड मेशिनहरू तपाईंको मानसिक विकारको उत्तर हो?